အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီယီယား ပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြို့နေ မြန်မာ မဲဆန္ဒရှင် မိသားစုမုမုများ၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ွဲ့ချုပ် ၂၀၁၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး / မ၀င်ရေးအပေါ် သဘောထား
၁။ ပြည်ပရောက် မြန်မာမိသားစုများသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနိုင်ရရှိရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် ဆန္ဒပြုခဲ့သော မဲဆန္ဒရှင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုမဲဆန္ဒရှင်များသည် ယခု ၂၀၁၀ အထိ အဖွဲ့ချုပ်ကိုအစဉ်တစိုက် ၀န်းရံနေကြသည်။
၂။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက တခဲနက် ထောက်ခံထားသော ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာချက်ပါ အချက်အလက်များကို အဖွဲ့ချုပ်အနေနှင့် ချွင်းချက်မရှိ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသင့်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။[…]
March 24, 2010 • By Burmese People in Los Angeles • Tags: 2010 Elections, Burmese, Burmese People in Los Angeles, Election Laws, National League for Democracy • Read more ➤
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ မြန်မာပြည်သားများ၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပေါ် သဘောထား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာတွင် ရောက်ရှိနေသော မိမိတို့သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ထိတိုင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံအားပေး ၀န်းရံလျက်ရှိပါသည်။[…]
March 24, 2010 • By Burmese People in San Francisco Bay Area • Tags: 2010 Elections, Burmese, Burmese People in San Francisco Bay Area, Election Laws, National League for Democracy • Read more ➤
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သို့ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုမှအကြံပြုချက်
အကြံပြုစာထဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ၏ ခေါင်းဆောင်ပါတီဖြစ်သည့် အပြင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပါတီအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သက်သက်သာမက ဒီမိုကရေစီအင်အားစု များနှင့် ပြည်သူတရပ်လုံးက ထောက်ခံဝန်းရံထားသည့် ပါတီအဖြစ်ပါ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အင်အားစုအားလုံးက ယနေ့ အချိန်အထိ လက်ခံထားကြောင်း ၊ နအဖ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို လိုက်နာပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကို မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုမှ သုံးသပ်ချက်များ စသည်များအပါအဝင် အကြံပြုချက် ၇ ချက်ကိုလည်းထည်းသွင်းဖေါ်ပြ ထားပါသည်။[…]
March 21, 2010 • By Forum for Democracy in Burma • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Forum for Democracy in Burma, National League for Democracy • Read more ➤
Political Groups Prepare for Election
Burmese political groups are preparing to register to contest the 2010 election following the release of the junta’s election and parties registration law, group leaders said on Wednesday. […]
March 10, 2010 • Tags: Arakanese League for Democracy, Democratic Party (Myanmar), Election Laws, National League for Democracy, Shan State People's Freedom League for Democracy, Union of Myanmar National Political Force • Read more ➤
Statement from the National League for Democracy (NLD) that they will not support the 2010 elections unless the regime meets key benchmarks. […]
April 29, 2009 • By National League for Democracy • Tags: Burmese, National League for Democracy • Read more ➤